J: Health - smoking ဆေးလိပ်
တစ်ချို့ကမသိလို့မှားကြတယ်..။ တစ်ချို့ကတော့သိရက်နဲ့ မှားကြတယ်...။ ကျွန်တော်ကတော့ သိသိကြီးနဲ့ကို ယမမင်းရဲ့ ရက်ချိန်းကို စောင့်နေပါတယ်...။ အခုလို ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်လေးနဲ့ယှဉ်ပြီးပေးတဲ့ စေတနာကို တန်ဖိုးထားပါတယ် :)
အိမ်မက်မှောင် ...ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
MP3eMP4..you are very much welcome. Cheers!
ဆေးလိပ်နဲ့ကျန်းမာရေး သင်ကြိုက်တာရွေး ..ဆေးလိပ်ကသောက်လို့ရလား။။။ ကျန်းမာရေးကသောက်လို့ရလား ဟီးဟီး :-P